Sida loo Waraaqda kaabta Lugood for Your iDevice / Android / Nokia Phone
Waa maxay sababta aad ugu baahan tahay inay soo saaro ee kaabta Lugood?
Waxaa jira inyar uun qaar ka mid ah in aad u baahan tahay inay soo saaro Lugood gurmad file in la soo celiyo aad content doonayay in aad iPhone, iPod, iPad, Android iyo Nokia phone.
* Lumay aad iPhone, iPad ama iPod taabto.
* dhaco tirtiro xogta ka iDevice.
* Ka dib markii JAILBREAK ah, xogta ku saabsan iPhone, iPad iyo iPod xiriiri tageen.
* Kaliya beddelaan hore iPhone in Phone ah Android ama Nokia, oo aad doonayso si ay u dhawrto xogta jir.
* Waxaa tahay qaar ka mid ah sababaha kale oo aad keeni soo saarida gurmad Lugood.
Sida loo Waraaqda Lugood ee kaabta File
Si kastaba ha ahaatee, Lugood gurmad files looma oggola in ay helaan ama Falanqeynta, ha soosaaray oo keliya. Taasi micnaheedu waa in, si toos ah uma aad qaadi karto wixii xog ah ka mid ah Lugood gurmad files. Waxaad si loo soo celiyo dhammaan xogta ku sugan si aad telefoon, iyadoo aan loo eegayn haddii aad dhabtii doonaysid ama aan.
Hadda, wax la bedelay. Halkan waa xirfadle gurmad Lugood shawladda , taas oo ka caawisaa xiriirada soosaaray oo dheeraad ah si aad telefoon, iyadoo aan loo eegin waxa maamula macruufka, Android ama Symbian (Nokia).
Si fudud soo saaro xogta ka gurmad file abuuray by Lugood, BlackBerry iyo kuwa kale oo xogta kala iibsiga u dhexeeya laba telefoonada.
Waraaqda Lugood gurmad file iyo kala iibsiga si aad iDevice / Android / Nokia phone.
Ceshano file kaabta BlackBerry iyo celin doonaa iPhone iyo Android phone.
Xiriirada Transfer, sawiro, SMS, music iyo ka badan oo u dhexeeya iDevice, Android iyo telefoonada Nokia.
Taageer sidayaal ugu weyn - AT & T, qaran, Verizon iyo T-Mobile.
Si fiican u shaqeeyaan iPhone, Samsung, HTC, iPad, iPod taabto, Nokia (Symbian) telefoonka iyo in ka badan .
Talaabooyinka Easy in ay dib u soo ceshano Lugood ee kaabta File
Tallaabada 1. Ku rakib oo baxsad Extractors kaabta Lugood
First of dhan, ka soo dejisan iyo gashato this on computer Windows ah. Waxa maamula si ay u helaan suuqa kala hoose.
Tag kaabta iyo Soo Celinta hab oo guji soo celi . In liiska hoos-hoos u, dooran ka Lugood gurmad file inuu soo galo suuqa kala soo celiyaa.
Sep 2. Isku Your Phone / Tablet si Computer ah
Ka qaada cable USB iyo xiriiriyaan phone / kiniin in kombiyuutarka. Waxa ay noqon kartaa iPhone, iPod taabto, iPad, phone Android iyo telefoonka Nokia ah. Marka waxa la ogaado, waxa aad arki doonaa in uu furmo.
Sep 3. Start Macdan Xogta laga Lugood ee kaabta File
Hadda, dhammaan Lugood gurmad files waxaa lagu muujiyey bidixda. Sax aad doonayso hal. Markaas, dooro macluumaadka aad rabto in aad Macdan gurmad Lugood faylka. Tusaale ahaan, haddii aad rabto in aad soo saaro sawiro ka gurmad Lugood, waa in aad sii Photos hubiyaa. Markaas, guji soo celi.
Xogta aad soo saaro karaa way kala duwan yihiin oo ku salaysan telefoonada caga kala duwan.
* Wixii phone Android, Laydinka soo xiriir kartaa, sawiro, video, SMS iyo wac abuse.
* Wixii iPhone, Laydinka soo xiriir kartaa, fariimaha qoraalka ah, sawiro iyo video.
* Wixii iPad iyo iPod taabto, Laydinka soo xiriir kartaa, sawiro iyo video.
* Wixii phone Nokia (Symbian), waxaad soo saaro karo xiriirada.
Talooyin dheeraad ah
Wondershare MobileTrans Ka sokow, waxaa jira gurmad Lugood kale shawladda - ka Wondershare Dr.Fone ee macruufka (iPhone Data Recovery) (Windows) ama Wondershare Dr.Fone ee macruufka (Mac iPhone Data Recovery) , taas oo si toos ah ka heli kartaa Lugood aad files gurmad iyo iyaga saaro qaybo kala duwan, oo ay ku jiraan camera oo duudduuban, durduri sawir, xiriirada, fariimaha, qoraalo, taariikhda wac, qoraal cod, iwm Oo waxaad ku eegaan karo oo wada kabsadaan ka mid ah.
Download version maxkamad free of software tan hoose oo u rakibi on your computer.
Sida loo Waraaqda BlackBerry kaabta Phone File iyo Bedelka si iPhone?
Waraaqda BlackBerry kaabta Phone File iyo Bedelka in Android Phone?
Sidee si ay u gudbiyaan Android Content Phone si iPhone?
Sida loo Copy Data ka iPhone si iPhone?
Sida loo soo biiray Android inay iPhone?
iPhone VS Android: Maxay ku kala duwan yihiin?
Maxay yihiin 17 Apps Free Best on iPhone?
Sidee si ay u gudbiyaan Faylal ay ka Motorola si iPhone?
Sidee View Lugood ee kaabta faylasha aad u heli lahayd
Sidee inuu ka soo kabsado Voice cadaymaha ka iPhone / iPad / iPod taabashada
Sidee inuu ka soo kabsado iMessages ka iPhone
3 Siyaabaha Soo Celinta playlists Lugood
Wareejinta aan iibsaday Gadan Faylal ay ka iPod in Lugood
Sida loo dayactir Waxaa ka dib Lugood Library Waayey
Sida loo Download Songs on Lugood
Sida loo ka Lugood saar tus
2 Methods si ay u gudbiyaan Iibsasho ka iPhone in Computer
Sida loo hagaagsan Lugood si iPhone
Sida lagu Helo Track Magacyada Lugood Library in Dufcaddii
Talooyin iyo tabaha in dayactir Lugood Library
Sida loo isticmaalo goolkii barbaraha ee Lugood
> Resource > Lugood > Sidee Macdan kaabta Lugood for Your iDevice / Android / Nokia Phone